Horseradish | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fanangonana tovovavy tanora amin'ny alàlan'ny voajanahary voajanahary
Ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny akoho dia tsy asa tsotra fotsiny, fa tena mahasoa. Ankoatr'izay, raha vantany vao nividy akoho teny an-tsena ianao, dia tsy mila mandany vola intsony mba hahazoana taratra vaovao ho an'ny vorona. Raha ny marina, nahoana no tena olana hafa, raha ny ankamaroan'ny zava-manan'aina dia manamboatra ny fifehezana sy ny fikarakarana ny zanany.
Sakafo fanangonana ririnina amin'ny ririnina
Ao amin'ny tahirin-tsakafo isam-bolana dia misy lovia vita amin'ny mozika. Noho ny fisian'ny voankazo misy vitaminina sy ianiana tena ilaina, io fotony io dia manana fanasitranana. Misy fomba an-jatony hanamboatra ranomandry. Ny root dia ampiasaina betsaka amin'ny sakafo. Eritrereto ny fomba fototra hanomanana ny ririnina amin'ny ririnina.
Toro-hevitra momba ny fitomboan'ny ranomandry: fambolena sy fiahiana
Ny fihinanan-kena dia tsimokaretina maharitra amin'ny fianakaviana Cabbage. Mamolavola faka volotara matevina, rantsana mivantana, ravina lehibe. Trondro an-tanindrazana - Southeast Europe, ankehitriny mizara any Azia, any Eoropa (ankoatra ny tropikaly) sy Amerika.
Fomba hahandro mahavaky ny ririnina any an-trano
Sakafo maro no ho maina amin'ny saosy maitso, izay nomena ny anarana hoe "kisendrasendra", noho ny iray amin'ireo ingredients. Ao amin'ny fiainana andavanandro, mbola mahafantatra azy ho toy ny horloder, mpihazakazaka soavaly iray, manongotra ny masony, Siberiana adika, kobay iray, sns. Saingy na inona na inona anarana nanandraman'ny olona ny fampitomboana ny fisondrotana, ny tahony sy ny tsirony dia tsy miova.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Horseradish